FISEMARE na ny firaisamben’ny sendikan’ny mpiasa malagasy revolisionera, omaly. Ao anatin’ny 1 volan’ny fanomezan-dra rahateo moa isika izao. Fotoana ihany koa io nanaovana tatitra mikasika ny zava-nahaliana momba ny fiainan’ny fikambanana tamin’iny taona lasa iny. Anisan’ny resaka ankoatr’izay ny mikasika ny fisondrotan-karama ho an’ny mpiasa tsy miankina sy ny fifidianana solontenan’ny mpiasa eo anivon’ny FISEMARE hatao amin’ity taona 2020 ity. Tsy ho ela dia ho fantatra ny isan-jato miakatra amin’ny karaman’ny mpiasa tsy miankina izay, hoy ny fanazavana, ary efa nisy ny fifampiresahana tamin’ny tompon’andraikitra. Ny taona 2018 dia saika nifantoka tamin’ny famahana ny olan’ny mpiasa ny hetsiky ny FISEMARE. Manomboka amin’ny toeram-piasana ka hatrany amin’ny fanaraha-maso ny asa, raha tsy maintsy mandalo amin’izany. Ny taona 2019 kosa dia nisy mpikambana notoriana orinasa tany amin’ny fitsarana misahana ady heloka. Olona nanatanteraka asa ireo anefa. Ny iray efa nivoaka ny didy fa ny iray mbola miandry, raha ny tatitra omaly hatrany. Faritra 15 ankehitriny no rakotry ny FISEMARE ary manoloana ny lahatsoratra an-gazety iray izay hita ho nivoy fampisaraham-bazana anay dia fanamby hapetrakay ny handrakotra ny faritra 22 eto Madagasikara, hoy hatrany izy ireo.